Mangwana hakuzovi ne iPhone 7 yekutenga muzvitoro zvepanyama | IPhone nhau
Kana iwe usina kuchengeta iyo iPhone 7 Plus, unogona kusakwanisa kutenga imwe mangwana
Gore rino Apple yakaratidza data rakaburitsa pachena kuti iyo iPhone yaona kutengesa kwayo kuderera zvichienzaniswa negore rapfuura kekutanga kubva pakatangwa iyo yekutanga iPhone. Zvinhu zvaiita kunge zvisiri kutarisa nani nekuvhurwa kwe iPhone 7, chishandiso chinogovana 90% yedhizaini yeiyo iPhone 6s, asi iyo yazvino data inoratidza kuti tinogona kunge takanganisa uye kuti iyo nyowani apple apple ichatengesa zvirinani kupfuura zvaitarisirwa
Apple yakati zuro nezuro, mangwanani-ngwanani muEurope, kuti kwaivepo yatengesa yese yekutanga stock ye iPhone 7 PlusNaizvozvo, iwe haugone kutenga chero muzvitoro zvepanyama pazuva rekumisikidzwa, ndiko kuti, mangwana. Chii chichava muzvitoro ichave iri 4.7-inch modhi, asi hakuzove neiyo imwe inowanika muGlossy Nhema, iyo nyowani ruvara yakavhurwa gore rino iro vashandisi vakafarira zvakanyanya (kunyangwe iine zvese zvinoratidza kuti iri # suwo re ino anus).
Iyo iPhone 7 inogona kutengesa zvirinani pane iyo iPhone 6
Hatina kukwanisa kufadzwa nemhinduro yekutanga ku iPhone 7 uye iPhone 7 Plus uye isu tave kutotarisira kutanga kutengesa kuzvitoro zvedu zvepanyama uye vatinoshanda navo pasirese.
Kutanga Chishanu, kuchave kune mashoma huwandu hweiyo iPhone 7s mune sirivheri, goridhe, rose goridhe uye nhema kune vatengi vanoshanyira Apple Stores. Munguva yekuchengetera nguva, huwandu hwekutanga hweiyo iPhone 7 Plus mune ese apedza uye iyo iPhone 7 Glossy Nhema yatengeswa kunze uye haizowanikwe kune vashandisi vanoenda kuzvitoro. Iko kuwanikwa munzvimbo dzakabatana dzekupedza kwese kunogona kusiyana uye tinokurudzira kuti ubvunze kwavari chaiko.
Chavasiri kuzotaura gore rino ndechekuti maPhones mangani akatengesa gore rino mukati mevhiki yekuparurwa kwayo. Vamwe vaongorori vanoti iyo iPhone 7 ichatengesa zvirinani kupfuura iPhone 6, smartphone iyo kusvika parizvino yaive rekodhi yekutengesa yaApple. Mune mamwe mazwi, zvese zvinoratidza kuti iyo iPhone ichatanga kutengeswa zviri pamutemo mangwana icharova rekodhi rekutengesa rakawanikwa muna 2014.
Kana pakupedzisira rekodhi idzva yakasimbiswa uye kana tikatarisa kuti dhizaini haina kuchinja uye kuti vabvisa 3.5mm headphone port, mubvunzo ndewokuti: kusvika papi kutengeswa kweiyo iPhone yechigumi kana vakagadzira iPhone girazi rese, rakamonyoroka uye riine OLED skrini?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Kana iwe usina kuchengeta iyo iPhone 7 Plus, unogona kusakwanisa kutenga imwe mangwana
Readdle inogadziridza Scanner Pro, Spark uye PDF Nyanzvi kutora mukana wezvinhu zvitsva zveiyo iOS 10
Mitsetse inotanga kuwana nyowani nyowani iPhone 7